Ngabe uhlala kuphela ekubhaleni? | Izincwadi Zamanje
Ngabe uhlala kuphela ekubhaleni?
Eminyakeni ethile edlule, ngangiphupha bhala incwadi, ukuthi bazoyishicilela ku- Umhleli kakhulu noma ngaphansi kwezinga eliphakathi nokubona ukumbozwa kwawo kwamanye amawindi ezitolo ezitolo zezincwadi zedolobha lami, phakathi kwabanye,… Illusion! Yebo, eminyakeni eminingana eyedlule, nganginokudideka ngalesi sihloko, ngaze ngakwazi ukumba kancane odabeni lokushicilela futhi ngihlangane nabantu abavula amehlo akho babeka izinyawo zakho phansi ...
Iqiniso elizungeze izincwadi nokushicilelwa kwazo lihluke kakhulu ... Bambalwa, bambalwa kakhulu ababhali yilabo abangasho ngempela ukuthi baziphilisa ngokubhala, futhi njalo, umsebenzi wokubhala, wawukhokhelwa kabi. Uma kungenjalo, buza uKafka, isibonelo bese usho okukodwa.
Uma sisho iSpain, sizokusho lokho Abalingiswa abanjengoBelén Esteban bathengisa izincwadi eziningi kunoMario Vargas Llosa (nayo engakhokhisi kabi), idatha engingazi kahle ukuthi ingabhalwa kanjani: uma kungenangqondo, kokubuhlungu, noma ngqo, eqinisweni elibi nelidabukisayo elizungeze izindaba ezithile zezwe. Ukushiya imibono kude, engivele ngiyelule ngokwanele kuyo, ngincoma le ncwadi: "Imibhalo kubuciko bokubhala" de Franz Kafka.
Yini esizoyithola kule ncwadi?
Le ncwadi ifaka zonke izinkomba zikaFranz Kafka, ezifinyeleleka kubahlanganisi, ngomsebenzi wakhe uqobo kanye nemibono yakhe esemqoka kanye nokubona kwakhe kubuciko bokubhala ngokujwayelekile, kubuciko bokubhala izincwadi nakubuciko bokuphatha incwadi.
Lokhu kuhlanganiswa kuqoqa izinto ezilandelana ngokulandelana emithonjeni ehlukahlukene kakhulu: I-Los Izidayari nguKafka, izincwadi zakhe (uFelice Bauer, uMilena Jesenská, uMax Brod…) kodwa futhi nezincwadi zokuxhumana nabahleli nababhali; kanye nemibiko, amanothi, izingcezu zemisebenzi yakhe nemibhalo yezingxoxo.
Le mibhalo inentshisekelo eyehlukile ekusetshenzisweni kwe- impilo nomsebenzi kaKafka, futhi bakhe kabusha ukuxhumana okusondele phakathi kwalaba bobabili ngoba, njengoba uJoachim Unseld esho, “Uhambo lukaKafka lokuphila luxhumene ngokungenakuhlukaniswa nomlando wezincwadi zakhe. Indlela ayilandelile ibiphawuleka ngethemba bese kuba yisinqumo sokuba ngumbhali, ngidlule kwezokuphepha zokuba munye (ezokuphepha ezenze ukuthi abe nekhono lokukhiqiza) aze afike ekudumazekeni (okwagcina kukhubaze konke ukukhiqiza kwakhe ngendlela ebuhlungu) lapho kuqinisekiswa ukuthi akunakwenzeka ukufeza inhloso yempilo yakhe ».
Umsebenzi kaKafka, ohlukanisiwe, oyindida, oqagelayo, nawo udla lokhu kubhalelana okungakhathali ngesenzo sokubhala uqobo.
Noma kungakhokhelwa kahle, noma ngabe awuboni ukuthi umshicileli unentshisekelo kanjani ngencwadi yakho, ukuba umbhali nokuzinikela kuyo kudlula inzalo yezomnotho emsulwa, uma kwenzeka, othile waqala ukudweba igama negama ecabanga ngayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Ngabe uhlala kuphela ekubhaleni?
Umklomelo we-Alfonso X El Sabio Historical Novel Award uye ku-Andrés Pascual
Kungani kungekho zincwadi zakudala zangekhulu lama-XNUMX?